Shiinaha CGX371SJ Mashiinka Mashiinka Tooska ah ee Beveling oo leh Soosaarayaasha Waxqabadka Qaadista iyo alaab-qeybiyeyaasha | SUNKON
Mashiinka Mashiinka CGX371SJ Muraayada Tooska ah ee Tooska ah ee Shaqada qaadaya
Shunde, Guangzhou, Shenzhen, Shiinaha
50 xirmo / Bisha
Duubmay by PE. Filim ama Sanduuqa ciyaarta-loox
T / T, L / C, Western Union, iwm
Hel Qiimaha Ugu Dambeeya
■Mashiinka CGX371SJ Glass Straight Line Beveling Mashiinka wuxuu la socdaa 11 matoorro oo ku habboon in lagu farsameeyo bevel & geeska hoose ee xaashida muraayadda oo leh cabbir iyo dhumuc kala duwan. Waxaa ku yaal qalab kor u qaadida dusha hore si ay ula qabsato ka baaraandegidda cabirrada kala duwan ee dhalooyinka ah.
■Shiidi qallafsan, shiidi kara iyo nadiifinta lagu dhammayn karaa hal mar, hubinta saxsanaanta iyo dhalaalka dhalaalka gaadhaya in saamaynta muraayadda.
■Saldhigga, dogobkiisa, geedka lulid, safka toosan iyo madaxa wax shiidaya ayaa ka mid ah qalabka wax lagu rido (annealed si looga hortago qallooca). Waxay leeyihiin iska caabin xad dhaaf ah xoqida iyo cilladaha, iyo sidoo kale sifooyinka ugu wanaagsan ee nuugista shoogga.
■Mashiinka madaxa lagu shiido ee beveling wuxuu ka socdaa calaamadda caalamiga ah: ABB, Electric wuxuu ka socdaa Schneider, sidoo kale wuxuu leeyahay khariidad isku xira aluminium iyo isku gudbinta suunka Synchronous.
■Waa qalabka ugu fiican ee wax lagu shiido ee lagu farsameeyo muraayadaha muraayadaha, muraayadaha farshaxanka, qurxinta iyo muraayadda alaabta guriga, albaabada iyo daaqadaha, muraayadda musqusha iyo muraayadda qurxinta, waa mashiin leh adeegsi badan.
■PLC iyo shaashadda taabashada ayaa ikhtiyaar ahaan loo heli karaa, oo si otomaatig ah u xakamayn kara dhumucda, dhumucda haraaga iyo ballaca bevel.
Xajmiga Max 2500 × 2500mm
Dhumucda muraayadda 3-19mm
Xawaaraha Transmissinon 0.5-6m / daqiiqo
Xagasha Bevel 0 ~ 45 °
Baaxadda 'Hypotenuse' 50mm
Qabsashada dhulka 7500 × 1300 × 2500mm
Gawaarida la dareemay
QAYBAHA QAAB-DHISKA AH